ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများတွင် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသိပ်သည်းမှုတိုးလာခြင်း - Social Ansiety Disorder (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
လူမှုတော့ပူပန် Disorder (2011) နဲ့ Parkinson ရောဂါလူနာတိုးပွားလာ dopamine Transporter သိပ်သည်းဆ
J ကို Neurol သိပ္ပံ။ 2011 နိုဝင်ဘာ 15; 310 (1-2): 53-7 ။ EPub 2011 ဇူလိုင် 23 ။
Moriyama TS, Felicio AC အ, ဆိုရင်ရှာဂါသည် MH, Tardelli VS, Ferraz HB, Tumas V ကို, Amaro-အငယ်တန်း, E, Andrade LA က, Crippa ဂျာ Bressan RA ။
Instituto Cérebro, Instituto က de Ensino အီး Pesquisa ဆေးရုံ Israelita အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း, Sao Paulo, ဘရာဇီးပြုပါလုပ်ပါ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
(ဝမ်းနည်းဖွယ်) လူမှုတော့ပူပန် Disorder အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ထက် PD လူနာအကြားပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အသင်းအဖွဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါဒါပေမယ့် neurobiological ယန္တရားနောက်ခံ PD ဝမ်းနည်းဖို့ predispose နိုင်သည်ကိုလည်းဖြစ်နိုင်. ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ PD လူနာအတွက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ striatal dopamine Transporter binding အလားအလာ (DAT-BP) correlating အသုံးပြုပုံဝမ်းနည်းနှင့်အတူ PD လူနာအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သော dopaminergic ယန္တရားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ် အဆိုပါ radiopharmaceutical အဖြစ် TRODAT-1 နှင့်အတူ SPECT ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဝမ်းနည်းမပါဘဲ generalized ဝမ်းနည်းနှင့် 21 PD လူနာနှင့်အတူက Eleven PD လူနာကဒီလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, အုပ်စုများအသက်အရွယ်, ကျားမ, ရောဂါကြာချိန်နှင့်ရောဂါပြင်းထန်မှုအဘို့အလိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်။ ဝမ်းနည်းရောဂါ SCID-ငါနှင့်အကျဉ်းချုပ်လူမှု Phobia စကေးနှင့်အတူလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု (BSPS) နဲ့အကဲဖြတ် DSM IV စံနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့ဒေတာကိုလည်းစုဆောင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ DAT-BP သိသိသာသာညာဘက် putamen များအတွက် BSPS အပေါ်ရမှတ်မှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် (r = 0.37, p = 0.04), left putamen (r = 0.43, p = 0.02) နှင့်လက်ဝဲ caudate (r = 0.39, p = 0.03) ။ သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှု (r = 0.23, p = 0.21) ညာဘက် caudate အဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်မရှိပါ။
ဤသည်တွေ့ရှိချက် dopaminergic ကမောက်ကမဖြစ်မှု PD အတွက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ pathogenesis ်ပတ်သက်နေမည်အကြောင်းတည်းသောအယူအဆအားဖြည့်စေခြင်းငှါ.